Semalt waxay qeexaysaa ficilada iyo ka fekeridda sameynta Naftaada iyo Shaqaalaynta SEO
Haddii aad rabto in qaar ka mid ah internetka joogaan mashiinnada raadinta ee boggaaga,waxaad u baahan doontaa adeegyo SEO ah si aad u gaarto natiijooyin suuragal ah. Adeegyada SEO ee xirfadlaha ah waxaa bixin kara shirkad SEO, ama waxaad awoodi kartaago'aanso inaad qabato hawlaha naftaada. Tusaale ahaan, haddii website-kaaga uu ka shaqeeyo waxyaabo xasaasi ah ama nuucyo aad u sarreeya sida culeyskaluminta, caafimaadka ama adeegyada maaliyadeed, sameynta SEO adigu aad ayay u adag tahay. Xaaladdan ayaa laga yaabaa inay kaa tagto kuwan soo socdafursadaha:
Waxbarashada Naftaada Naftaada
Shaqaaleynta shaqaale khabiir ku ah
Kireysiga iyo bixinta dibadda waxay u muuqataa in uu helo khubaro khibrad leh oo caawiya darajobogga ku jira raadinta dabiiciga ah. Wareegidda mashiinnada raadinta waa hab aad u dheer waxaana badanaa la socda tartiib tartiib iyo lama hubo. Maalgelinta aQadarka lacagta iyo wakhtiga ayaa macnaheedu noqon karaa in badan oo rikoorka raadinta. Markaad diyaar u tahay inaad sameyso naftaada SEO, waxaa fiican inaad tixgelisokhayraadka loo baahan yahay, shuruudaha iyo qodobo gaar ah oo saameeya SEO. Haddii kale, waxaad kireysan kartaa kuwa iyagu kuu qabanaya si xirfad lehoo sooma. Fursada ugu dambeysa waa raadinta shirkad SEO ah oo sumcad leh oo leh waayo-aragnimo ah darajada internetka.
Nik Chaykovskiy, Maamule Guusha Macaamiisha Sare Adeegyada Digital waxay ku siinayaan guurtida ku saabsan sida aad u sameyn kartid go'aanka lagu fulinayo SEO-ga.
1. Qiimaha sare
Arrimaha dhaqaaluhu waa kuwa ugu muhiimsan tixgelinta. BarashadaSEO for website-kaagu wuxuu noqon karaa fikrad fiican. Si kastaba ha noqotee, si deg-deg ah ayaad u ogaaneysaa inaad u baahan tahay koox aad u khibrad lehdherer dheeraad ah. Inta badan suuqyada internetka ayaa laga yaabaa in ay ku kacaan qiimaha ilaa 500usd..Si kastaba ha noqotee, haddii aad samaynayso SEO for shirkad weyn, kuwaasTirooyinka ayaa kor u qaadi kara ilaa 10000usd.
2. Khabiir / Khibrad waxtar leh
Shirkadaha SEO waxay leeyihiin khabiiro leh khibrad badan oo ku saabsan aagag badansuuq-geynta internetka. Waa lagama maarmaan in aad isweydiiso waxa aad jeceshahay website-kaaga. Tusaale ahaan, hay'ad ayaa laga yaabaa in ay ka badan tahaykhibrad u leh dib-u-eegidda marka loo eego raadinta ereyga muhiimka ah. Sidoo kale, SEO guud ahaan waxay macnaheedu noqon kartaa jack ee dhammaan xirfadaha, kuwaas oo laga yaabo inay ku habboon tahaymaadada xasaasiga ah.
3. Khatarta foosha xumida muddada dheer
Markaad la shaqeyneyso shirkad, mid ayaa kobcin kara waxyaallaha iyo qiyaasiddaHorumarinta dadaalka SEO. Haddii wakaaladdaadu aysan soo saarin natiijooyin la ogaan karo muddo dheer, waxaa muhiim ah in la beddelooo leh ikhtiyaar wax ku ool ah. Xusuusnow SEO ma aha wax hal mar ah waxayna qaadan kartaa wax ka badan hal sanno si loo helo natiijooyin.
4. Doorashada ugu wanaagsan
Marka aad go'aamiso waxa aad sameyneyso SEO-gaaga, waa lagama maarmaansi aad uga doorato aragtida kharashka ku baxa. Xaaladaha badankood, xulashada hay'ad waxay noqon doontaa doorashada ugu fiican. Shirkad SEO ah oo fiicanwaa inay kaa caawiyaan inaad dib u hesho lacagta aad ku maalgelisay haddii aysan faa'iido lahayn.
Mararka qaarkood, way adag tahay in la ogaado inaad u baahan tahay inaad sameyso SEO adiga keligaaama kireyso koox. Iyadoo ku xiran hadafka iyo kartida shaqada aad rabto, helitaanka ikhtiyaarka ugu fiican waxay noqon kartaa hawl culus. Kuwa badan baa jirashuruudaha lagu raaci karo si loo xalliyo xaaladahaas. Si kastaba ha ahaatee, miisaaniyadda ugu yar ee gargaarka SEO ee xisaabaadka bishiiba ee ah $ 100 iyoCaawinaad cad oo caawinaad xirfadle ah ayaa kuu soo geli doonta faa'iidooyin aad u weyn intii aad adigu samayn lahayd. Sawir ku saabsan khibradda qof ee khaladaadka iyoguulahaaga, waxaad abuuri kartaa istaraatijiyad fiican oo horumarinta muddada fog ee shirkadahaada oo aad ka fogaato khaladaadka keeni kara hoos u dhigista Source .